SHEEKADII XAASKEYGA JINNI BEY KA AHAATAY. Jaceylkii Amal oo banaanka yimid (qeyntii 7aad). – Filimside.net
SHEEKADII XAASKEYGA JINNI BEY KA AHAATAY. Jaceylkii Amal oo banaanka yimid (qeyntii 7aad).
December 31, 2018 Cabdiraxmaan Anteeno
Sheekada waxay qeybtii hore noo maraysay markaan kacay oo qolkeyga ku laabtay, lkn hooyadey oo aad moodid in su’aalaheyga shaki badan ka qaada y ayaa iga soo dabo gashay waxayna igu tiri “ ma moodaa xasanow inaad arimaha Jinniga ihtimaam siineyso? Side wax u jiraan bal ii sheeg??
Markaas ayaan ku dhahay “maya hooyo kaliya waxaan rabay inaan ayeeyo sheekada ka qasin si aysan iiga xumaanin”
Waxaana dareemay markaan hadalkaas dhahayay in hooyo dareen xoogan qaaday isla markaasna waxaan ogaa hooyo in wixii ay ka shakiso aysan sinaba uga harin ilaa ay kazoo sal gaarto.
Habeenkii markii dadka oo dhami wada seexdeen ayaan usoo baxay daarada guriga si aan xoogaa ugu leersado, hase yeeshee waxaa durba I galay dareen xoogan waxaana dareemay in amal ii dhawdahay isla markaasna qolkeyga igu sugeyso.
Anigoo socodka boobsiinaayo isla markaasna aad I moodid qof waqtiga la tartamaayo ayaan qolkii orod ku galay Alla farxad badanaa waa Amal oo I hor taagan waxayna ag taagneyd daaqada qolkeyga iyadoo markaan dharcad oo aad u qurux badan xiran waxayna eegeysay dhankaas iyo cirka ayadoo aad moodo in iftiinka dayaxa uuba yahay biriq iyada kamid ah sidey u ifeyso owgeed.
Waan istaagay waxaana gudo galay inaan quruxdeeda aanan marnaba laga dhargin daawado anigoo mudo dhowr daqiiqo ah iyada daawanayay ma hubo iney imaatinkeyga dareentay lkn aniga waxaan noqday mid uu dareen xoogan galay waxaan rabaa inaan u dhawaado oo aan habsiiyo iskuna duubo si ay u dareento garaaca wadnahaeyga.
Lkn waxaa I celinaayo waxaanan ogeyn wuxuu yahay tolow ma fuleynimaa? Ma ogi, anigoo wali meesha taagan ayay iyadoon isoo fiirinin igu tiri “xasanow irida noo xir kaalayna agteyda Imow”
Albaabkii ayaan soo xiray agteeda ayaana imid anoo sideeda oo kale cirka fiirinaayo hase yeeshee kama helin waxaana dib ugu laabtay inaan iyada daawado carafteedana ogsajiin ka dhigto.
Markaas ayaan hal mar si lama filaan ah ah gacanteyda timaheeda ugu taabtay anigoo u salaaxayo quruxdoodana daawanayo isla markaasna dareenkeyga meeshii ugu sareysay taaganyahay waxaana niyada iska leeyahay geesi iska dhigo oo gabadha isku duub habsii oo dareenkaaga dareensii.
Anigoo mowjadahaas ku jiro ayay Amal halmar si kadis ah dhankeyga ugu soo jeesatay iyadoo isoo fiirineyso isla markaasna fiirinteeda aan ka dareemay sidii iney ileedahay maxaa sugee kaalay hab isii.
Lkn go’aan qaadashada waan ka daahay taasoo keentay in Amal kursi meesha yaalay ku fariisato waxay I weydiisay “manta jawi farxadeed ayaad ku irtaa ee side wax u jiraan?”
Markaas ayaan ugu jawaabay “markasta oo aad ila joogtid ayaan jawigaan macaan gala”
Waxay iigu jawaabtay “lkn shalay sidaan ma aadan aheyn”
Markaas ayaan dhahay “shalay waa wax tagay aan ka gudubno oo aan mustaqbalka ka fikirno”
Waxay iigu jawaabtay “mustaqbalka maalin wuxuu noqon asna wax tagay oo laga gudbay, mustaqbalna majiro marba hadii wixii tagay uusan saameyn ku lahaaneynin, in wixii tagay laga cararaana waxay lamid tahay in waxa soo socdo laga carary”
Markaas ayaan dhahay “Amal ii ogolow inaan maanta caqligeyga fasax siiyo si aan uga nasto dhibka fikirka … waqti xaadirkaan la joogo ma doonayo inaan ka fikiro ruux aan adiga aheyn”
Waxay iigu jawaabtay “ok Amal ayaad ka fikireysaa hada lkn waa tee? Ma Amaltii hore mise mida mustaqbalka?”
Markaas ayaan ku dhahay “adiga oo kaliya ayaan kaa fikirayaa aniga ahaan waxaad ii tahay tusaale dhanka jaceylka ah waxaadna ii tahay nuurkii qalbigeyga runtii ma aqaano kalmad aan kugu sifeeyo waayo lagama helaayo qaamuuska eray adiga lagugu tilmaami karo marka adiga ayaa wax tagay iyo mustaqbal labadaba ii ah”
Markaas ayay igu tiri “lkn markii aan kaa tago hada waxaan noqonayaa qof xusuustaada ku jiro oo wax tagay ayaan noqon marka markaas ma wax tagay ayaad ka fikireysaa?”
Waxaan ugu jawaabay “haaa…. Wixii tagay oo adiga kugu saabsan dabcan waan ka fikirayaa waayo tamarteyda adiga ayay kugu tiirsantahay iyo inaan rajeeyo maalinta ku xigta inaan adiga ku arko”
Markaas ayay hadana I tiri “kawaran maalinta xigta hadii aanan joogin?”
Markaas ayaan ku dhahay “Amal plz naga daa su’aalahaan iyo afkaartaan badan”
Markaas ayay I dhahday “ ma u jeedaa xasanow sida aad mustaqbalka uga carareyso? Hadii aad waxa tagay ka cararto maadaama aadan ka helin mustaqbalkana ka cararto maadaama uu asna ku cajabinin ilaa goormee carareysaa?”
Markaas ayaan dhahay “waa maxay farxad? Waa ilbiriqsiyada aad ka faa’iideysaneyso kuwaasoo kaa dhamaanayo markii aad ka fikirto iney farxadaan dhamaaneyso”
Markaas ayay I dhahday “ok, aniga waan kuu cabsanayaa waxa bari kugu dhici karo, waayo ma ogi inaan sii joogi doono iyo in kale? Marka ma rabo hadii wax ay dhacaan bari kamaalin oo xiriirkeena dhamaado inaad murug badan dareento oo aad la kulanto wixii aad horay ula kulantay”
Markaas ayaan dhahay “Amal adiga maxaa maskaxdaada ka guuxayo iisheeg hadalkaaga wuxuu gogol xaarka u yahay”
Waxay iigu jawaabtay “xasanow aniga waxba uma gogol xaarayo, lkn markii aan adiga kaa fikiro waxaan dareemaa iney noo roontahay in xiriirkeena halkaan ku dhamaado, waa sax waan ku jeclahay cishqigeyga ayaadna tahay mana doonayo inaan la’aantaada noolaado”
La soco qeybta 8aad oo xiiso leh.